Mufananidzo wakakosha chiuru chemashoko | Kubva kuLinux
Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Updated on 16/11/2015 13:07 | Chitarisiko / Kuita munhu, Kugoverwa, GNU / Linux
Kune vashandisi ve Debian uye shamwari dzinondiziva, ndinongokusiira meseji: Iva nechokwadi, izvi zvinogona kunge zviri zvenguva pfupi, usavhunduke. U_U
Nekudaro, sezvavanotaura kunze uko: "Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi" saka ndinokusiira desktop yangu uye yazvino kugovera .. 😀
Gtk theme: Zukitwo.
Xfwm theme: eGTK.
Doki w bar.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi
Ndiwo madiro andinoichiita ini, ine chaiyo distros, hapana nzombe yemapenzi HAHAHAHA
Zvave kutokukanganisa !!! Zvese zvakanaka kwazvo, asi ndakaganhurirwa nekuti handigone kushandisa maAURs ..
Cast? Vanewo Cuba yakavharika kana chimwe chakadai?
Haisi Cuba, ndiyo ISP yedu.
Arch ndiyo distro yandinofarira, asi Ushingi nguva dzose neiyo troll modhi paDebian iri yakanaka kwazvo distro.
Ini ndinoshandisa Kubuntu uye ini handizvione sendiri benzi pazviri ¬¬
Uye hapana ati ndimi. Izvo zvekuti mushandisi anoshandisa Ubuntu kana kumwe kugovera kunoitirwa "newbies" hazvireve kuti vanozviita nenzira iyoyo. =)
KZKG ^ Gaara <"Linux akadaro
Kusvikira mwedzi mishoma yapfuura ndaishandisa Kubuntu, uye ... chero munhu aindiona sebenzi akamupa kurova HAHA
Pindura KZKG ^ Gaara <"Linux
Huya, iwe waive Kubuntoso, uye ita nyasha dzekudzokorora izvo zvinhu zvakanditorera awa pane kutumira blowjobs nepositi HAHA
Dai iwe waiziva kunonoka kubatana kuri pano… zvakanditorera maminetsi makumi maviri kungovhura iyo "Zvinyorwa" peji reWP-Admin, uye ini handikuudze kuti zvakanditorera nguva yakareba sei kuvhura chinyorwa chako.
Zvakatoburitswa… ndatenda 😀
Ah, uye ini handina kuzvitarisa ... saka kana uine chero zvikanganiso, hehehe ... vachakudya uri mupenyu HAHAHAHA
Iko kungokanganisa kuripo kune nguva uye tsamba huru pamwe chete, hapana Hoyganism kana chero chinhu hahaha
Ini ndaida zvidhori, ikozvino ndinozvishandisa mu kde yangu!
Ichi chakakomba distro, hapana chekuita naFedora, iri "rakanaka zvakapusa."
Pindura kune zvisingaonekwi15
Yakanaka kwazvo, ini ndinofunga iwe unofanirwa kubvisa iro bhokisi kubva Kumba uye Warehouse uye raizotaridza zvirinani, ndiwo mafungiro angu ane mwero.
Ive nekuchengera kuti kana iwe uchingozviedza, iwe haudi chero chimwe chinhu, ndinokuudza nekuti ini ndanga ndichiedza distros yega yega mbiri nhatu uye handina kumboravira chimwe chinhu kweinopfuura mwedzi mishanu
Zvakanaka murume kana ndichiifarira ndikagara, ndingaitei? Ipapo ini ndaizove nemagove maviri andinoda: Debian neArch .. 😀
Isu takafanana, mushure mekunge iwe waedza Arch Linux uye uzivi hwayo yekutsvoda kudiki (tisingatauri pacman) muropa.
Ah uye mumusangano weArch Linux, kunyangwe paine vanhu vanoziva zvakawanda, haugone kuwana mhinduro dzinogumbura, chakanyanya chavanogona kukupa iwe kuverenga iyo wiki usati wabvunza, wakanamatira kune iyi link kune iyo wiki inobata nezvauri kutsvaga kana kukundikana izvo, chinongedzo kumusoro unogadzirisa mubvunzo.
Andres Silva akadaro
Ah! zvakanaka… ini ndagara ndichida kuyedza Arch Linux, asi handina kuwana nguva yekuzviita ... chidzidzo chekumisikidza nekuisiya yakadaro nenzira yevashandisi vekupedzisira yaizokosheswa !!
Pindura kuna Andrés Silva
Iri munzira 😀
Zvakanaka! tichave takamirira iwe!
Ndichaedza kuzvigadzirira mangwana, kana ndisina zvimwe zvekuita .. 😀
Ndakagara ndichida kuyedza Arch, chingandidzora zvishoma chinhu chekusaina kwepakeji uye zvese izvo zvinhu. Asi zvakadaro uye nedzidziso yeElav, ndakakurudzirwa.
Ndakaedzwa kuyedza arch, asi sezvo ini ndichishandisa komputa yangu kubasa, ndeye basa chete, chimwe chinhu chandakaverenga nevanoshandisa arch chakandimisa:
Dzimwe nguva mune yekuvandudza chimwe chinhu chinomira kushanda, iyo x, internet kubatana nezvimwe, uye izvo zvakandimisa.
Chii chaungandiudza nezvazvo?
Pindura kuna Alfredo_9172
Ndanga ndiine Arch kwemazuva maviri, asi nditende kuti kana ndine dambudziko, munhu wese achazoziva nekuda kwekunaka kwandichazotaura pane ino blog XD Zvisinei, ini ndiri nyowani kukuudza, iwe inofanirwa kuteerera kune vamwe vafundisi vekare vatinayo muDesdelinux. 😀
Ichokwadi kana iwe ukatanga kuumba, dzimwe nguva unowana zvikanganiso, asi kwete nekuvandudzwa, kunze kwekunge iwe uchishingairira kuyedzwa, nzanga-kuyedzwa, mizhinji yekuyedza (izvo zviri pachena kuti hazvikurudzirwe kuti timu yebasa ive neidzo zororo. midziyo).
Parizvino 0 kubondera, ndave nekumwe kupunzika kwakawanda pazvakashanda naUbuntu kupfuura izvozvi neArch ... handizive, ini ndinokuudza kana iwe ukayedza zvikorekedzo. Nenzira yandinodawo Debian uye ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba, asi chinhu chakanaka pamusoro peArch ndechekuti zvinoita sekunge iwe une kugadzikana kwemuyedzo, asi nemapakeji edivi kana ekuyedza, akanyatsonaka .
Chinhu chakanaka nezve archlinux ndechekuti: lol rakaipa kana rakaipa sezvaungaisa pasi, uye kazhinji dambudziko riri pakati pechigaro nekhibhodi.
Ndiri kushushikana kuve ne arch mumuchina wangu mazuva ese zvinondisimbisa zvakanyanya 🙂
Hahaha chinhu ichi chinodhakwa
Yakanaka kwazvo 😀
Zvakanakisa, neizvozvo kutsva kutsvaga kutsva, hahaha.
Ndanga ndichishandisa linux kweanoda kuita makore mana. Pakutanga, pamwe neyakajairika kusahadzika iyo distro yekuisa? akaisa maoko ake pane chero munhu, kubva kuBuntu kusvika kuSlackware, kuburikidza nemandriva, openuse, fedora uye debian, zvobva zvazoita huipi hwekuyedza: arch, chakra, crunchbang uye kunyange imbwanana. Nguva dzaidzidza.
Iye zvino ndanga ndichishandisa Debian kweanopfuura gore, uzivi hwandino tevera ikozvino kuita hunyanzvi mu distro, izvi zvinondipa mukana wekugadzirisa zvinetswa (izvo zvandisingawanzo kuva nazvo naDebian) zvinomuka, chengeta komputa yangu ichishanda Nezvibereko, ndisingatambise nguva pakuisirwa uye musangano nguva zhinji (nekuti ini ndinoshandisa iro rekuyedza bazi) kana shanduko yega yega distro, uye ini ndinosvika pakuziva nekunzvera mune akasiyana mafungidziro eDebian ayo ari kunyanya kunyanya, kubva kune yayo package system kunharaunda yayo. .
kuburikidza ne akadaro
Ndinoda huzivi hwako 🙂
Iwe unoshandisa tafura ipi?
Pindura kuna pela
Ini ndinoshandisa Gnome 3-Gnome-shell.
Ndiyo imwe nyaya, sezvo ini ndaimboshandisa "kutenderera" munzvimbo dzakasiyana dze desktop zvakare.
Asi kubvira ndichishandisa Debian "kunze kwebhokisi" ini ndangoshandisa Gnome, uye ikozvino, mukuchinja, ndakachinjira kuGnome 3 ine gnome-shell. Ini ndakaedza chaizvo kutora zvishoma uye handina kuramba shanduko. Gnome 3 neGnome-shell inoratidzika kwandiri senzvimbo yedesktop iyo inobvumidza iwe kuti ubudirire, nekuti iwe une zvese kubva kubhodhi, pasina kudiwa kwekumbogadziriswa.
Semuenzaniso, ini ndaiwanzoshandisa yekuvhura yekushandisa uye madhairekitori muGnome 2 kubva kubhodhi, ikozvino ndinayo nekutadza ingobaya kiyi (pane pc, iyo ine hwindo diki) uye ini ndinotanga kunyora zvandinoda, izvo inotonditendera kuti nditsvage ndakananga kuGoogle. Izvo pakati pezvimwe zvinhu ndizvo zvandinotenda nezveGnome-shell.
Iyo desktop theme yakanyangara uye kumisikidza kunetswa, asi zvine basa rei kana izvo zvaunoda kushanda nekushandisa, kwete kuti zvinoita kunge zvakapora
Iyo Gnome nyowani ine zvayakanakira nezvayakaipira asi pakupedzisira ndizvo izvo nharaunda yakasarudza kune yazvino-ramangwana. Kana isu tisingazvifarire, saka tinoita zvazvinoita kana isu tinoshandisa Linux mint, iyo yakagadzira forogo inotyisa, kubva pane zvandinoona, yeGnome2.
Yakanakisa uzivi. Chaizvoizvo, kwandinonyanya kugadzikana kuri muDebian, kunyangwe chiri chokwadi kuti Arch inoshamisa.
Hapana zvimwe kana zvishoma. Kuyera.
Hufilosofi hwaWarkito hwakanaka uye hunogona kushandiswa muArch.
Sezvandambotaura kakati wandei Arch Linux, yakanaka kana yakaipa senge shasha / dhongi rinoisa / rinochengeta / rinotamba naro.
nenzira yandakamira kuuya kuno kwemazuva mashoma uye zvese zvakashanduka, zvino ini ndinongoda kuudzwa kuti Kushinga kuri kushandisa Ubuntu.
HAHAHAHAHA kwete ... hapana kuwedzeredza, asi elav akashandisa Arch uye akaifarira zvakanyanya, Kushinga akashandisa Windows (uye ndinopika kuti haisi jee), uye chimwe chinhu chidiki HAHAHAHA ....
Iwe unoona, pano isu tinogara tine zvinoshamisa LOL !!!!
hahahahaha kushamisika kwakanaka uye ndinorangarira zuva iro Kushinga kwakatumirwa kubva kumawindo asina kana kuunyana hahahaha
Hahaha kwete, Windows zvinoipisisa hahaha
Maitiro ekuisa ArchLinux kuburikidza ne USB kifaa
Wbar-config: Chishandiso kugadzirisa uye kugadzirisa Wbar